Iyo Munich yenoveli uye yakavhurwa sosi inowedzera chitsauko chitsva | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Munich yenoveli uye yakavhurwa sosi inowedzera chitsauko chitsva
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, Noticias
Parizvino muzana ramakumi maviri nemana, guta reGerman reMunich rave rekutanga kukunda uye mushure mekukundwa kwevadziviriri veiyo yakavhurwa sosiMuna 2003, guta rakafunga kutama kubva paWindowsNT kuvhura sosi mhinduro. Sechikamu chezviito izvi, akazove nhengo yeThe Document Foundation uye akatanga yake yekuparadzira Linux (LiMux) Asi, muna 2017 akadzokera kumaoko eMicrosoft.
Sarudzo yekusiya yakavhurika sosi yanga iine chekuita nesarudzo sa meya wemumwe murume anonzi Dieter Reiter uyo asati azvipira kuita zvematongerwo enyika ndiye akagutsa Microsoft kuti igare muMunich. Mumwe wevavakidzani vechivako cheMicrosoft yaive kambani yekubvunza yeAccenture. Fungidzira kuti ndeupi mubatsiri Reiter akasarudza kuona kuti kana kusashandisa rakavhurika sosi raive zano rakanaka? Accenture neMicrosoft vaive vanobatana kwemakore.
Iyo Munich yenoveli. Mifananidzo kubva muzvitsauko zvinotevera
Panogona kuitika zvehunyanzvi uye zvemari, Guta richasimbisa zviyero zvakavhurika uye software yemahara ine rezinesi rekuvhura.
Tichaomerera kunheyo ye'veruzhinji mari, yeruzhinji kodhi '. Izvi zvinoreva kuti sekureba sekunge pasina hunyanzvi kana data remunhu rinobatanidzwa, kodhi yekodhi yesoftware yeguta ichaitwawo pachena.
Ndima dziri pamusoro idzi chikamu che chibvumirano chemubatanidzwa mutsva wekutonga uyo uchave uri musimba kusvika 2026. Mubatanidzwa mutsva uyu unoumbwa nevanoona nezvezvakatipoteredza uye veruzhinji vezvematongerwo enyika.
Kunyangwe kubva munharaunda yakavhurika sosi vakapemberera sarudzo, kubva kuFree Software Foundation Europe (hapana chekuita naStallman's) vaive vakangwarira mukuongorora kwavo. Ndiani akataura aive Alex Sander, yeruzhinji maneja maneja weEU
Isu tiri kufara kwazvo kuti iwe urikutora kumusoro kwemapoinzi eiyo 'Ruzhinji mari, yeruzhinji kodhi' mushandirapamwe watakatangisa makore maviri nehafu apfuura. Asi zvakakoshawo kuti uzive kuti ichi chinongova chirevo muchibvumirano chemubatanidzwa chinoratidzira hurongwa hweramangwana.
Chero yakadaro nhanho-nhanho shanduko inogona kutarisirwa kutora makore. Asi zvinoitawo kuti Munich inokwanisa kufamba nekukurumidza kupfuura vazhinji nekuti haisi kutanga kubva pakutanga. Zvinogona kufungidzirwa kuti zvimwe zvirongwa zveLiMux zvichiri kushandiswa uye kuti vamwe vevashandi vanoziva mashandisiro avo.
Sezvazvinowanzoitika mune izvi zviitiko, maonero akapatsanurwa. Maonero asingasaruri yakaunzwa naBasanta Thapa, nyanzvi muhurumende yedhijitari kuFraunhofer Institute for Open Communication Systems muBerlin:
Maitiro ekugadzira aya marudzi esarudzo haatombove ehunyanzvi uye hachisi chinhu chakaipa.
Mune mazwi ehunyanzvi, hapana system iri nani iri nani pane imwe kana zvasvika pakushandiswa kwemazuva ese.
Thapa anonongedza kuti ndeapi maitiro anofanirwa kutarisirwa:
Kazhinji, pane maviri akakosha ekunamatira mapoinzi: kugamuchirwa kwevashandisi, uko kunosanganisira kudzidzisa vanhu pamaitiro matsva, uye chinongedzo pakati peyakavhurika uye yakavharwa software. Izvo zvinogona kuve chero chinhu kubva pakutora gwaro reLibreOffice kuverenga mune chimwe chirongwa, kune software yakanyorerwa manisipari kunyanya, semuenzaniso, marekodhi echikoro, zvibvumirano zvetender, kana kuunganidzwa kwemarara.
Iyo nyanzvi inokurudzira kutora kufunga iyo mitengo yekutyora zvibvumirano zvazvino uye iyo ingangoita-yakareba-nguva kuchengetedza kubva kuchinjisa.
Ramba uchifunga kuti 2020 haisi 2003. Mamiriro ezvinhu ezvematongerwo enyika akasiyana uye padanho renyika uye European Union, pfungwa yehutongi hwema digital iri kutanga kupihwa kukosha kwakanyanya.
Maguta madiki akati wandei eGerman nemaguta, semuenzaniso Leonberg mudunhu reBaden-Württemberg neTruchtlingen muBavaria vakatotamisa michina yavo kuvhura sosi. Kunyangwe kubva kuhurumende yepakati ivo vari kutanga kufarira chidzidzo ichi.
Iyo Federal Ministry yeImukati akarairwa kubvunza kambani PwC kuti iferefete kuti Germany ingakwanise sei kuwana kuzvitonga kuzere uye usanyanya kutsamira pane vatengesi vakaita seMicrosoft.
Imwe yemazano eongororo yaNyamavhuvhu 2019 yaive yekudyara mune yakavhurika sosi software sezvo sarudzo iyi inogona kutungamira kurusununguko rwechigarire kubva kuvatengesi vakuru.
Parizvino zvinangwa zvakanaka chete. Usarasikirwa nezvitsauko zvinotevera kuti uone kuti nyaya inonakidza iyi inoguma sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iyo Munich yenoveli uye yakavhurwa sosi inowedzera chitsauko chitsva
Tor 0.4.3.5 Python 2 kusvika ku3 yekuvandudza inosvika uye nezvimwe
Plasma 5.19 beta ikozvino inowanika pasina nhau dzakanyatsojeka, asi ichinatsiridza yakakurumbira graphical nharaunda